Halatra omby tao Fenoarivobe Mbola miandry fatratra ny “puce” ny mpiompy
Mbola andrasana fatratra hatrany ny “puce” na zana-pinday apetraka amin’ireo omby, raha ny loharanom-baovao azo antoka avy amin’iny faritra afovoany andrefan’ny faritanin’Antananarivo iny.
Hatreto aloha, na dia ao amin’ny faritra Bongolava nanatanterahana izany voalohany aza, mbola andihizan’ny dahalo ny faritra, tahaka ny ao Fenoarivobe. Tamin’ny 29 aogositra tamin’ny 2 ora sy sasany maraina no nitranga ny halatra omby. Ny tanànan’Androfiabe, fokontany sy kaominina Ambohitromby, distrikan’i Fenoarivobe no notafihin’ireo jiolahy ka nahazoany omby 20. Tamin’ny 6 ora sy sasany maraina vao nahazo fampandrenesana tamin’ny sefom-pokontany ny mpitandro filaminana tany an-toerana, tao amin’ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Ambohitromby. Voalaza mantsy fa an-tsokosoko no nidiran’ireo dahalo tao an-tanàna. Tsy fantatra ny isan’ireo malaso. Tsy nisy ny fifandonana teo amin’ireo jilahy sy ny fokonolona. Raikitra avy hatrany ny fanarahana ny dian’omby ka 17 tamin’ireo biby fiompy 20 no tafaverina tamin’ny tompony. Ny iray efa novonoin’ny dahalo nataony vatsin-dalana, raha ny fampitam-baovao avy eo amin’ny zandary Ankadilalana. Ny borigadin’ny zandary ao amin’ny renivohitry ny kaominina nidina ifotony no manatanteraka ny fanadihadiana sy ny famotorana ary ny tohin’ny raharaha.